Sam Hartman we "mutungamiri": Kwete Spain neEurope chete vane sarudzo ... Debian zvakare | Linux Vakapindwa muropa
Sam Hartman we «mutungamiri»: Kwete Spain neEurope chete vane sarudzo ... Debian futi
Debian ndechimwe chezvirongwa zvikuru munharaunda, haisi chete kugoverwa kweGNU / Linux, inoenderera zvakanyanya. Isu takatotaura pane dzimwe nguva kuti iwe unogona zvakare kushandisa Debian nedzimwe mhodzi, senge kFreeBSD, Hurd, nezvimwe. Uye chirongwa chakakura zvakadaro chinodawo hutongi uye chimiro kuitira kuti chishande nemazvo. Uye pamusoro pehukuru hwehutungamiriri ndiye mutungamiri.
Mutungamiriri weDebian Anga Achinja kubvira Ian Murdock, uyo asisiri nesu, akaivaka. Pakave paine vatungamiriri vakati wandei muDebian, uye nesarudzo yeDPL 2019 (Debian Project Leader), ikozvino tasangana neimwe nyowani. Saka, kuti uwane ruzivo, "mukuru" weprojekiti achave Sam Hartman, uyo akabuda semukundi. Akatanga kuita saizvozvo kubva muna Kubvumbi 21 wegore rino uye achazviita kusvika Kubvumbi 20, 2020, apo mumwe gwaro raachavhoterwa.
Kunyanya, Sam Hartman ndiye wechi17 mutungamiri wechirongwa cheDebian. Mushure meIan Murdock, mutungamiri wekutanga uye muvambi weprojekiti, achiteverwa naBruce Perens (rimwe zita hombe rinozivikanwa munharaunda), Ian Jackson, Wichert Akkerman, Ben Collins, Bdlae Garbee, Martin Michlmayr, Branden Robinson, Anthony Towns, Sam Hocevar, Steve McIntyre, Stefano Zacchiroli, Lucas Nussbaum, Neil McGovern, Mehdi Dogguy, naChris Lamb, nenzira iyoyo.
Kubva kuLxA tinokupa iwe makorokoto kuna Sam Hartman yenzvimbo nyowani uye ndinovimba ichave inoburitsa nguva nyowani sezvayange iri, iine zvinhu zvakawanda zvakanaka sezvakaunzwa nesu neDebian Project kusvika zvino. Nenzira, kana iwe uchida rumwe ruzivo, iwe unofanirwa kuziva kuti kune huwandu hwevane zana zana vanogadzira purojekiti, makumi matatu neshanu vavo vakavhota vachishandisa nzira yeCondorcet uye mhedzisiro yemavhoti iri mukati iyo yepamutemo Debian peji.
Nenzira, usamuvhiringidze iye nemutambi wenhabvu ane zita rimwe chete ... uye haasi mhuri yaGreg futi;) hahaha
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Sam Hartman we «mutungamiri»: Kwete Spain neEurope chete vane sarudzo ... Debian futi